Uma umsekeli ubuhle wabantu ongokwemvelo namanxusa ezakhelwe izinwele, i-athikili yethu ukuphi. Namhlanje niyikhulume le izinto zokwelapha like itiyela birch izinwele. Kulesi sihloko uzothola izimpendulo zemibuzo mayelana yiziphi izinkomba kanye contraindications ngoba ukusetshenziswa kwezidakamizwa enjalo, kanye nempendulo ikhasimende. Ngaphezu kwalokho, sihlanganyela izimfihlo yokwenza imoto okuzenzela kanye buso okunomsoco azosiza ukubhekana kangcono nale nkinga of nezinwele, dandruff, ngokweqile sezinwele oily.
Uyini itiyela birch?
Igama elithi "itiyela 'lisho" wokushiswa. " It ezihambisana igama ne indlela ukukhiqizwa ketshezi. Phakathi ukusetshenziswa birch amagxolo resin ngokubeka amalahle yezingxenye e kettles ekhethekile.
Ingqikithi nombala omnyama. Ngokusho konsinstentsii sifana ibhotela. It has a kakhulu iphunga ezingemnandi futhi ukunambitheka.
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi itiyela birch iqukethe semali izakhamzimba. Ngakho-ke, la mafutha is kabanzi kwezokwelapha Cosmetology. Ngakho, ngo-ezimbonini zokukhiqiza birch itiyela equkethwe ekwakhiweni ezifana amafutha Wisniewski.
Abantu basebenzisa zombili ngaphandle futhi ngomlomo. Ukuze ekwelapheni izinwele kanye ekhanda birch itiyela esetshenziswa wedwa noma kwengezwe izimonyo. ukusetshenziswa ngempumelelo birch itiyela izinwele okunamafutha, dandruff elithandwa nezinwele.
Ngenxa ukwakheka esiyingqayizivele equkethe izinto ezihlukahlukene eziwusizo, isibonelo ezifana inhlaka oluyingozi, birch itiyela has a spectrum ezibanzi yesenzo. It uzwakalise isinqandakuvunda, elwa namagciwane, antifungal, Lentulo, umphumela amanxeba. It has a izinzwa zendawo isakhiwo omiswe. Ngezansi izithombe kusula umphumela ukuboniswa izinwele birch yomsizi netiyela.
Uma kukhona izinkinga kanye izinwele isetshenziswa?
ukusetshenziswa ngempumelelo birch itiyela ne nezinwele. Kanti futhi kuyasiza ukuba sibhekane nezinkinga ezinjalo izinwele, dandruff, oily sezinwele ukucasulwa ubala futhi ukukhula kancane.
ukusabela ezingezinhle kanye nezincomo
I itiyela - izidakamizwa ocebile. Ngakho-ke, ngokweqile ukusetshenziswa njalo kungaba zisongele nesenzakalo komzimba nezinto. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa nokunwetshiwe kungabangela ubuthi anobuthi zomzimba. Kulokhu, lo muntu waphawula isicanucanu, ukuhlanza, uhudo, ukuquleka, futhi ezimweni ezimbi kakhulu - nokulahlekelwa ukwazi. Ngakho-ke, ukwelapha izinwele birch itiyela kufanele kwenziwe ngokucophelela, ukugcina inani esibekiwe kanye nezincomo. Sebenzisa itiyela birch lichaza ekwakheni imithi zezimboni kumele kucace ukunamathela imiyalelo izidakamizwa.
Ngo nemibuthano abelaphi bendabuko kuyinto mpikiswano eqhubekayo mayelana sekufanele awushiye ngokungaziniki itiyela birch ngaphakathi ekwelapheni izinwele. Abasekeli balobu indlela yokuthola yesimangalo ukuthi ukusetshenziswa okunengqondo birch itiyela ngeke nje kuphela kukuzuzise ngokugcwele emzimbeni wonke umzimba ube nempilo. Abaphikisi indlela temlomo kwesicelo birch itiyela isimangalo sokuthi ukusetshenziswa ejenti zangaphandle kuletha nemiphumela emikhulu, futhi kungenzeka ohlangothini ukusabela lapho lusetshenziswa ngale ndlela kusho kakhulu ephansi.
Ochwepheshe musa ukutusa ukusetshenziswa birch itiyela ngaphakathi, njengoba kuyingozi enkulu empilweni ngisho nokuphila. Zikhona izindlela eziningi imithi yendabuko, lapho birch itiyela izinwele isicelo ihlelwe ngokulandelana kwezihloko. Kodwa, ngokusebenzisa izidakamizwa ngaphandle, kumelwe uqaphe kakhulu: ungasebenzisi njalo futhi isikhathi eside. Ngaphambi ukusebenzisa cleanser ku izinwele ekhanda, ukuhlolwa izidakamizwa esihlakaleni.
Ikhaya ikhambi izinwele ukunakekelwa
On emashalofini ezitolo ungathola izindlela ezihlukahlukene ukuze anakekele izinwele kanye ekhanda ne ukwengeza itiyela birch. Kodwa ngokuvamile e ukwakhiwa okunjalo agent nenzuzo kuqukethwe hhayi okungaka, ngakho izinzuzo ebonakalayo bekhulisa, futhi izindleko amashampu yabo ephakeme kunaleyo evamile nama-gel.
Kungenzeka yini ukwenza amakhambi ekhaya ngetiyela birch? It kuvela ukuthi akukho lula! Ukuze wenze lokhu, kudingeka nje ukuba sisale isigamu sehora esiningi esikhululekile, futhi unakekele yokufuna izakhi ezidingekayo.
Singasetshenziswa okumsulwa noma buhlanjululwe ifomu birch itiyela izinwele. Ungadliwa ulula futhi kufinyeleleke kuwo wonke umuntu. Ngokwesibonelo, ukuthi uketshezi lolu exutshwe glycerol endaweni isilinganiso 1: 1. Ingxube wafakwa wagcoba phakathi ukuwabhulasha sezinwele. Khona-ke wesula nge swab ukotini, kanjalo nokususa itiyela ngokweqile. Kungasetjenziswa ngendlela birch itiyela enjalo ebusuku, egqoke phezulu isigqoko yezimonyo. Futhi ekuseni udinga ugeze izinwele zakho. Le nqubo Kunconywa usuku zokugwema ukuphuka kanye nezinwele.
Shampoo ngetiyela birch
Indlela yokusebenzisa birch itiyela uboya a imoto? Ngokuba ukulungiswa lokhu remedy ikhaya uzodinga ugeze izinwele zakho kuyindlela elula kakhulu nengabizi commercial imoto ngezindleko zemithi engamakhambi. Modern izindlela ezibizayo kulokhu asifanele, ngoba ziqukethe ezihlukahlukene yizici zamakhemikhali lokho, kungaba asabela ngetiyela. Lokhu kungaholela imiphumela engahlosiwe, isibonelo, izinwele bangase bathole umbala engathandeki noma sezinwele uyozishisa.
isakhi Active ngeke ngqo Birch itiyela, okuyinto angathengwa at ekhemisi wangakini. Futhi kudingeka uwoyela ukunambitheka. Kuyoba fihla nephunga abuhlungu itiyela birch futhi eminye ekucebiseni izinwele nge amavithamini kanye nezinye izinto ezuzisayo. Khetha amafutha abalulekile bakhetha into esemqoka ukuthi laliphinyiselwa iphunga elimnandi.
Gilazi, uthele ingxenye inkomishi imoto kwezohwebo.
Govuza 2 wezipuni birch yomsizi netiyela.
Engeza 20 amathonsi namafutha abalulekile. Hlanganisa futhi.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi kuphekwe kahle imoto okuzenzela kufanele zibe nokuvumelana ketshezi. Uma izimali ezisele awugqinsi, maningi amathuba ukukhetha ukuthenga imoto asifanele leresiphi. Kulokhu, ingxube obukhulu of itiyela kuyoba nzima kakhulu ugeze off, indaba izohlala izinwele.
Sebenzisa ngomumo eyenziwe ekhaya ikhambi njengoba imoto evamile: isicelo izinwele, lather, uhlikihla kwamaminithi ambalwa, bese uxubha.
Recipe imaski izinwele
Tar birch izinwele ingasetshenziswa njengendlela imaski yezimonyo. Ukuze womshini umenzeli enjalo okokuqala kudingekile ukukhetha isizinda yezimonyo. Kungenzeka kakolweni uwoyela lwegciwane, burdock namafutha ocolisekileyo noma calendulakuva tincture. Izisekelo kudingeka 5 ml. Govuza isipuni itiyela birch e base ekhethiwe. Khona-ke ungakhohlwa ukunambitheka ejenti ngosizo amafutha abalulekile.
Ingxube siphelile is akhuhlwe singene sezinwele ngalesosikhathi embula ngokulinganayo phezu izinwele. Vala kufakwe epulasitikini noma wagqoka isigqoko ekhethekile, ukuxoxa ithawula. Gcina imaskhi okuzenzela ihora. Khona begeza izinwele zakho nge imoto. Le nqubo kungaba kwenziwe kanye ngesonto.
Tar birch izinwele: isicelo, ukubuyekezwa, intengo
itiyela Birch unqobile trust sokuphulukiswa yayo kwengoma. Lidonsa abathengi kanye ukutholakala lezo zimali. Kuwufanele ibhodlela itiyela birch ruble ngu-150. Izibuyekezo zisikisela ukuthi imfuyo kwanele ukuxazulula ngempumelelo inkinga ka nezinwele futhi sithuthukise isimo sabo jikelele.
Ngokusho abathengi, okunengqondo usebenzisa ikhambi lemvelo njengoba birch itiyela, ungakwazi ukubhekana ngempumelelo kanye izinwele kanye ekhanda izifo, kuyilapho kulondolozwa ibhajethi umndeni.
Ukwelapha izindawo cranberry
Kanjani ukusiza iklabishi leaf ukukhwehlela?
EKorinte Canal - kusukela iphupho ngokoqobo